Inguqulo 0.7.4 – Le nguqulo springy
June 4, 2011 by okunikezwayo 8 Amazwana
Muntu ukuqagela ukuthi yini entwasahlobo limelela?
Lesi ukukhululwa kuza ku kancane sekwephuzile isikhathi sethu. Kodwa kakade yephukela single day thwebula irekhodi ngokupheka ukweqa 500 uphawu.
Lo ukukhululwa nakuba encane nature ongenakho ezinye anezele nice.
Okokuqala, ngolimi lokuzenzakalelayo asibeka Transposh manje overrides lowo obekwe kuleyo njalo WP_LANG, lokhu kuvumela umshini WordPress mu lapho zonke site kungalawuleka ngolimi ezahlukene phezu backend. Isici engayala obuphakathi ekugcineni ngokuvumela kid sami sokuba blog yakhe siqu ngolimi yena angaba ukuphatha.
Thina ufake shortcode tp esenza ukuba komkhiqizo le transposh kolimi wamanje, nakuba kungase kungabi izwakala okuningi, lokhu anezele ezincane kuvumela ukubonisa izithombe ezahlukene izilimi ezahlukene, ungafunda ngakho lapha.
An Ngaphezu kwe-constants ezimbalwa ikhodi yethu parser, Manje vumela coders (hhayi abasebenzisi) ukushintsha parser yethu yokuziphatha ukuze aphule nemisho on nezixhobo emikhulu, ubheke phezulu parser.php esinalo imibhalo.
Izinguquko ezengeziwe futhi bug yokushaywa zihlanganisa:
Iframes kuhlanganisiwe ngaphakathi amakhasi manje ukuzama ukufaka ngolimi efanele
Bug fixed nge kokusebenzisa = kuphela”futhi” Ipharamitha ye-shortcode tp yiziphi detections engalungile of umthombo kolimi eyenziwe ezengeziwe ekuvezweni
German wanezela ukuhumusha by Jenny Beelens kusuka professionaltranslation.com
Jabulela nguqulo, utshele abangani bakho ngakho, ungatsheli izitha zakho noma yini, abonisane nge abameli uma ngempela futhi ungakhohlwa ukubaluleka komndeni wakho.
PS: Siyazi mayelana ehleliwe Google Translate API deprecation kanye plugin isazoqhubeka isebenze, Imininingwane kuyodalulwa ezinguqulweni esizayo.
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele Umake With: 0.7, minor, ukukhululwa, wordpress mu, plugin wordpress
Inguqulo 0.7.3 – Wokunqamulela support
March 25, 2011 by okunikezwayo 55 Amazwana
Namuhla abasichathazele thina version 0.7.3 okusenza nokweseka wokunqamulela ngaphakathi zikhala wordpress, lokhu kungasetshenziswa abanye Izinto ehloniphekile futhi okuyiwona sidale ividiyo ngenhla, ngakho uma imizuzu emihlanu mahhala futhi akukho lutho olungcono ukukwenza, nje ubukele ividiyo. Ngale kwalokho siyobe recommand ngokufunda imibhalo at http://trac.transposh.org/wiki/ShortCodes.
Ezinye more bug fixes kwenezelwa kule ukukhululwa, ikakhulukazi ukwehlisa umthwalo (kanye duplications) ukuthi bot bangase adale on edit amakhasi, futhi uqede ezingadingeki kumhlangano amafayela for bot.
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele Umake With: 0.7, minor, ukukhululwa, wokunqamulela, ividiyo, plugin wordpress